March 2, 2021 - Khitalin Media
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကိုဘယ်တော့မှမထီလေးစားမလုပ်မိပါစေနဲ့ . . .
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကိုဘယ်တော့မှမထီလေးစားမလုပ်မိပါစေနဲ့ . . . ချစ်နေချိန်တော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ပေမယ့်နာကျင်ရတာတွေများလာတဲ့အခါ ပစ်ချတတ်တယ် . . . မိန်းမတွေက တကယ်ချစ်လာရင်သူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအသားနာအောင် လုပ်နေတာတောင်မှချစ်လို့လုပ်တာပဲဆိုပြီး အပြစ်မမြင်တတ်ဘူး . . . ။ ယောကျာ်းတွေ ချစ်တယ်ဆိုတာထက်မိန်းမတွေက ပိုချစ်တတ်ကြပါသေးတယ် . . . ကိုယ်ချစ်သူအတွက်ဆို အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင် ပေးဆပ်ရဲသူတွေပါ . . . ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ အချစ်ကိုတန်ဖိုးမထားပဲစော်ကားရင်လည်း လှည့်ထွက်တတ်တယ် . . . ဘယ်လောက်ပဲ မပြတ်သားနိုင်ပါဘူးပြောပြောတကယ်ပြတ်သားပြီးဆိုရင် ဒူးထောက်တောင်ပန်းပြီးဆွဲထားနေရင်တောင် လှည့်မကြည့်တတ်ပါဘူး . . . မျက်ရည်ကျစေတဲ့သူကို ချစ်တတ်ပေမယ့်အပြုံးတွေကိုပြန်လိုချင်လာရင်လည်းပြတ်ပြတ်သားသား ကျောခိုင်းရဲတဲ့သူတွေပါ . . . မိန်းမတစ်ယောက် ချစ်နေချိန်မှာတန်ဖိုးမထားပဲနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ရင် နောက်တချိန်နာကျင်ရမယ့်သူကမင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် . … Read more
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ၃လပိုင်း တစ်လစာဟောစာတမ်းလာပါပြီ
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ၃လပိုင်း (၁.၃.၂၀၂၁) မှ (၃၁.၃.၂၀၂၁) ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း အများဖတ်ရှုနိုင်အောင် Like and Share ခြင်းဖြင့် မျှဝေပေးလိုက်ကြပါ။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး ။ ။ ဒီတစ်လအတွင်း လုပ်ငန်းသစ်များ ပေါ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကောင်းရခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းများ လုပ်ရတတ်ပါသည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက်ဝင်လာလိမ့်မည်။ ငွေဝင်သလောက် လက်ထဲမြဲမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ရတာထက်ကုန်တာများလိမ့်မည်။ အထက်လူကြီးများ၏ အထောက်အပံ့ အကူအညီ ရတတ်ပါသည်။ ဆုံးရှုံးထားသော ငွေကြေးများအတွက် ပြောဆိုဆောင်ရွက်ရန် အခါသင့်သည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေး ။ ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုလွဲပြီး ဒေါသရှေ့ထားကာ စကားများရတတ်သည်။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပင်ဖြစ်မည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။ ချစ်သူကြောင့် … Read more
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ မိန်းကလေးတွေ အသဲစွဲ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးခံရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ လတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေပြီး တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အားဖြည့်လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဒီနေ့ထိ နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ယုံသာမက သူချစ်ရတဲ့ ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်နိုင်အောင် အကာအကွယ်ပစ္စည်း စုံစုံလင်လင်နဲ့ ရှေ့ကနေ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် လိုက်နာရမယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း အဆက်အပြတ်ဖော်ပြခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အတိုက်အခိုက်တွေကြားကနေ အန္တရာယ်လွတ်အောင်ပြေးလွှားရင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရတဲ့ဒီယိုလေးကို သူရဲ့အကောင့်မှာဖော်ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မိသလို ရှေ့ကနေ ရဲဝင့်စွာ ရပ်တည်နေတာကြည့်ပြီး လေးစားမိတာအမှန်ပါပဲနော်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို … Read more
လက်ဆန်းနည်းလေးပါ။မိန်းခလေးတွေအတွက်သီးသန့်ပါ။ အရွယ်ရောက် တဲ့မိန်းခလေးတွေက အစ အရွယ်လွန် အပျိုကြီးတွေ ..တခါတရံ တခုလပ် အိမ်ထောင်ပျက် အစရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ချစ်စကားကမ်းလှမ်းခံရတာ မေတ္တာရှိကြောင်းပြောလာတာ၊ လက်ထပ်ခွင့်ပန်လာတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်…ရင်ခုန်ရတာ တဖက်၊ကြည်နူးရတာ တမျိုးနဲ့ နောက်ဆုံးတကယ်ချစ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ပေါ်လာစမြဲပေါ့၊ဒီပညာလေးကလွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှော့မတွက်ပါနဲ့ တကယ်မှန်တာ။တကယ်ချစ်မချစ် တွက်စစ်ကြည့်မယ်နေ… အဆင့်(၁) ကို့ကိုချစ်စကားလာပြောတဲ့သူရဲ့ နာမည် အပြည့်အစုံကို ဗေဒင်သင်္ချာဂဏန်းတွေအဖြစ် ပြောင်းပါ။ အက္ခရာနဲ့ သင်္ချာဂဏန်းတွဲပြထားပါတယ် ဗျည်း ကိုသာယူပါတယ်..။ အမည်ဗျည်းအက္ခရာ ဗေဒင်သင်္ချာဂဏန်း အ ၊ ဥ ၊သြ ၁ က ခ ဂ ဃ င ၂ စ ဆ ဇ ဈ ည ၃ ယ … Read more
ကောင်လေးတွေ သဝန်တိုလာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ ( ၆) ခု
ကောင်လေး တွေ သဝန်တို လာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ ( ၆) ခု ယောင်္ကျားလေး တွေ သဝန်တို လာရင် မိန်းကလေး တွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောပြတတ်တာကြောင့် ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မိန်းကလေး ဘက်က နားမလည်ရင်တော့ ပြဿနာ ဟာ တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင့် ချစ်သူ ကောင်လေး ဒီအရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို သဝန်တို နေတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။ ၁။ စပြီး ဂရုမစိုက်တော့ဘူး စကားပြောနေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် ဂရုမစိုက် သလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ပြောတဲ့ စကားထဲမှာ ယောက်ျားလေး အကြောင်းပါလာရင် ….သူ့ဘက်က ဂရုမစိုက် သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘာမှကို မပြောတော့ပါဘူး။ … Read more